Wararka Suuqa Kala Iibsiga Ee Laga Qoray, Haaland, Lionel Messi, Mata, Eric Bailly Iyo Neymar
HomeWararka WargeysyadaWararka Suuqa Kala iibsiga ee Laga Qoray, Haaland, Lionel Messi, Mata, Eric Bailly Iyo Neymar
April 4, 2021 Wararka Wargeysyada, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Qeybta Danbe Suuqa kala iibsiga 4 April
Manchester City ayaa isku dayi doonta inay garaacdo kooxo badan oo ka mid ah kooxaha reer Yurub ee xafiiltanka ka dhexeeyo si ay u xaqiijiso soo qabashada da ‘yarka Gabriel Gudmundsson oo ka socda Groningen, Todo Fichajes .
Juan Mata ayaa lagu wadaa in uu helo heshiis kordhin lama filaan ah Manchester United inkastoo uusan Boos ka heysan Ole Gunnar Solskjaer, Daily Star .
Manchester City ayaa liiskeeda mudnaanta koowaad ka dhigtay qabashada Haaland, iyadoo Pep Guardiola uu haatan doorbidayo u dhaqaaqista Erling Haaland oo ka sarreysa ninka reer Argentina ee Messi sida ay qortay The Mirror.
Bayern Munich ayaa u furan inay amaah kula soo wareegto goolhaye Alexander Nubel iyadoo goolhayaha uu ku dhow yahay inuu ka tago kooxda, Todo Fichajes .
Arsenal ayaa u furan inay Glen Kamara dib ugu soo celiso Premier League xagaagan, sida laga soo xigtay Me Me Sport .
Qeybta Hore Suuqa kala iibsiga 4 April
Daafaca dambeedka midig ee Napoli Elseid Hysaj ayaa beeca xorta ah ku bixi kara xagaagan Calciomercato.it ayaa warinaya in Paris Saint-Germain, Roma iyo AC Milan ay dhammaantood la soo xiriireen inay wakiilkiisa kala xaajoodaan heshiiska uu ugu biirayo. Calciomercato.it
Barcelona ayaa ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo xagaaga Nabil Fekir, sida uu sheegayo Estadio Deportivo .
Manchester United ayaa baareysa suurtagalnimada ay Nuno Mendes ugala soo wareegeyso Sporting CP.
Sida laga soo xigtay Record , kooxda Ole Gunnar Solskjaer ayaa diyaar u ah inay Alex Telles ka dhigaan qeyb ka mid ah heshiiska. Record ,
Sebastian Kehl ayaa qirtay in Borussia Dortmund laga yaabo inay gaarto heer aysan awood u laheyn inay ceshato Erling Haaland. Goal
Arsenal ayaa lagu qasbi karaa inay iibiso xiddigo da ‘yar sida Bukayo Saka xagaagan, sida ay qortay The Times. Haddii Gunners ay ku guuldareysato inay u soo baxdo Champions League, milkiilaha Stan Kroenke ayaa doorbidi lahaa inuu iska iibiyo ciyaartoy halkii uu maalgashi ku sameyn lahaa kooxda. The Times.
Inter ayaa indhaha ku heysa inay u dhaqaaqdo daafaca Manchester United Eric Bailly, sida ay qortay Daily Record.
Atletico Madrid ayaa isha ku heysa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Tottenham Harry Winks hadii ay macquul tahay in uu dhaqaaqo, Sky Sport
Sida laga soo xigtay Mail , heshiis labo sano ah ayaa dhawaan la isku afgaran karaa – kaas oo u ogolaanaya Messi inuu ballan qaado ilaa iyo ka dib Koobka Adduunka ee 2022, ka hor inta uusan aadin MLS. Mail
Neymar ayaa ku soo laabtay diirada Barcelona, ​​iyadoo weeraryahanka reer Brazil uu soo jiitay inuu ku laabto kooxdiisii ​​hore. Sida laga soo xigtay Ara , Neymar wuxuu ogaaday in Lionel Messi uu qarka u saaran yahay inuu sii joogo Barcelona – taas ayaana ku riixeysa inuu ka laabto PSG. Ara